कोरोनाले के गर्दैछ, अनि हामीके ? – AP Khabar
कोरोनाले के गर्दैछ, अनि हामीके ?
२ बैशाख २०७७, मंगलवार ०५:२९ 2020-04-14 एपी खबरLeaveaComment on कोरोनाले के गर्दैछ, अनि हामीके ?
कोरोनाले के गर्दैछ ?
संसार यति बेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीबाट ग्रस्त छ । अत्यन्त सबल र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा भएका शक्तिशाली राष्ट्रहरु समेत धरासायी हुँदै गएका छन् । दिनहु नयाँ संक्रमित फेला परिरहेका छन् । मृत्यु हुनेको संख्यापनि चुलिदैछ । अन्य देशहरुमा महामारी बढ्दै गर्दा भाईरसको उत्पती भएको मानिएको चीनमा भने यसको प्रभाव घटीरहेको छ । राष्ट्रका सबै संयन्त्र मिलेर काम ग¥यो भने मात्रै भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने स्पस्ट उदाहरण हो यो ।
यस्तो भयावह अवस्थामा नेपालको परिस्थिति भने दयनीय छ । कोरोना भाईरसको जाँचकालागि गुणस्तरीय प्रोगशालाहरुको अभाव छ । शंकास्पद व्यक्तिहरुको परिक्षण जुनस्तरमा हुनुपर्ने त्यो हुनसकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार बैशाख १ गतेसम्म ५ हजार ६ सय ९१ जनाको परीक्षण भएको छ । जस मध्ये १४ जना संक्रमित देखिएका छन । उनीहरु मध्ये १ जना उपचार पछि सञ्चो भएर घर गईसकेका छन् । यी मध्ये अधिकाशं संक्रमित बाहिरबाट आएका व्यक्ति हुन् ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट संक्रमित सहजै भित्रिएको तथ्यको आधारमा पनि समाजमा अदृश्यरुपमा कोरोना संक्रमितको ठुलै जमात भएको आशंका गर्न सकिन्छ । आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको ( एएभ् ) को अभावमा स्वास्थ्यकर्मीहरु उच्च जोखिममा कार्य गर्न बाध्य छन् । निजि स्वास्थ्य संस्थाले स्थानीयस्तरमै गुणस्तरहिन पीपीइको व्यवस्था गरेका छन् । सरकारबाट उपलब्ध गराईएका सामाग्रीको गुणस्तरमापनि प्रश्न उठिरहेको छ । कमशल सामाग्री वा उपकरणहरुबाट संक्रमणको जोखिम उच्च रहन्छ । सबैले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने स्वस्थ्यकर्मी संक्रमित भए उनीहरुको सम्पर्कमा आउने असंख्यव्यक्ती सजिलैसगं सक्रमित हुन्छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि पेशागत मर्यादा कायम गरि स्वस्थ्य सेवामा संलग्न भै धर्मनिर्वाह गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सबै पक्षले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबाल बढाउनुपर्ने हो । कतिपय सञ्चार माध्यममा स्वास्थ्यकर्मीको नियतमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने खालका समाचार आईरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जेलमा थुन्ने प्रयास गर्नेदेखि लिएर मुख्यमन्त्रीले लाइसेन्स खारेज गर्ने धम्की दिएर स्वास्थ्यकर्मीको मनोबाल कमजोर पारिरहेका छन् । अहिलेको समयमा मानिसको रक्षा गर्ने प्रमुख पात्रहरुले कमजोर मनोबलका साथ काम गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु अत्यन्त घातक हुनसक्छ । चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई डेराबाट निकाल्ने, डेरामा आउन नदिने जस्ता क्रियाकलाप निन्दनीय छ ।
सरकारले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि लकडाउनको आव्हान गरेको छ । नागरिकले यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर पूर्ण रुपले पालना गर्नु पर्ने हो । तर लकडाउन फितलो देखिएको छ । कोरोना प्रभावित ठाउँहरुबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई लुकाउन खोज्नु, सामाजिक दुरी पालना नगर्नु, क्वारेनटाइनमा बस्न नमान्नु, आफ्नै घर, गाउँ जान जिद्दी गरिरहेको देखिन्छ । सर्वसारधणमा देखिएको अनुशासनहिनताले कोरोना संक्रमण तिव्र गतिमा पÞmैलिएर गम्भीर समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । अहिलेको समयमा कृत्रिम अभावको सृजना गरेर कालोबजारीलाई प्रशय दिनु दण्डनीय अपराध हो ।
सरकारी कदमपनि जिम्मेवार र जवाफदेही देखिदैन् । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद तथा उपलब्धतामा भ्रष्टाचारको गन्ध आईरहेको छ । यस्ता घटनाले सरकारप्रतिको विश्वासनियतामा कमी आउँछ । संकटको बेला अनुशासनहिनता तथा गैरजिम्मेवारीपनले स्थितिलाई नियन्त्रण रेखाभन्दा बाहिर लैजान सक्नेखतरा छ ।
अब के गर्नेत ?
● केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले सरोकारवाला (स्वास्थ्यक्षेत्र, सुरक्षानिकाय, सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारी, उद्योगी व्यापारी एवं नागरिकसमाज) संग गहन छलफल गरि प्रभावकारी नीतिनिर्देशन बनाई अविलम्ब कार्यन्वयन गर्नुपर्छ ।
●दुरदृष्टी र सबल कार्यनीतिको परिचय दिँदै पुर्वनिर्धारित अस्पतालहरुमा उपलब्ध सिमित स्रोतसाधनलाई केन्द्रित गरि कोरोना शंकागरिएका बिरामीलाई एउटाबाट अर्को अस्पताल धाउनुपर्ने समस्याबाट मुक्ति दिनुपर्छ । बिरामी भौतारिनु जस्ता अन्यौलले यो संक्रमणबाट साधारण आत्मरक्षा उपकरण पीपीईबाट समेत बञ्चित स्वास्थ्यकर्मीको एउटा ठूलो समूह जोखिममा छ । तसर्थ पुर्वनिर्धारित अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित वातावरण एवं बिरामीका लागि परिक्षण तथा उपचारको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अर्थात कोरोना भाईरसको परिक्षण गर्ने किट र उपकरण जस्तै पि.सि.आरमेशिन, भेन्टिलेटर इत्यादि उपलब्ध गराई छिटो भन्दा छिटो सेवा प्रभावकारी बनाउनु जरुरीछ । अनलाईन मार्फत देशविदेशका अनुभवी चिकित्सकबाट तालिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
● बाँकी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संयन्त्र कोरोना संक्रमित बाहेकका बिरामीको उपचारमा खटाउन सकिन्छ । त्यस्ता अस्पतालमा समेत आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराई कोरोनासंकटका लागि तयारी अवस्थामा राख्नसकिन्छ ।
● चीन लगायत कतिपय मुलुकको अनुभवले ‘लकडाउन’ कोरोना संक्रमण फैलन नदिने उत्तम उपाय भएकोले यसको शतप्रतिशत कार्यान्वयन गराउनुपर्दछ । अत्यावश्यक कार्य बाहेक घरबाहिर निस्कनेलाई कानुनीकारबाही गर्नैपर्छ । सकिन्छ भने राज्यले नै त्यस्ता सामाग्री नागरिकको घरघरमा सुरक्षित हिसाबले पु¥याईदिनुपर्छ ।
● सुविधासप्पन्न क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको व्यवस्था समय रहँदै चुस्तदुरुस्त पारिनुपर्दछ ।
● सुरक्षानिकायलाई पनि सुरक्षित वातावरण तथा अन्य सेवासुविधाहरु उपलब्ध गराउनुपर्छ । लक्डाउन तथा अन्तराष्ट्रिय सिमाक्षेत्र विशेष गरि भारतसित जोडिएका ठाउँलाई अझसशक्त रुपमा नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ ।
● कालोबजारीले गर्दा माहमारीको समयमा उत्पन्न हुनसक्ने आभावलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानिय प्रशासन तथा नागरिक समाज सचेत रहनुपर्छ ।
● स्थानीय नेता तथा नागरिक सामाजका अगुवाले समस्यामा परेका नागरिकलाई सेवासुविधाहरू जस्तै खाना, पानी, औषधि उपचारका लागि प्याकेजिङ।्, ढुंवानी तथा वितरणका लागि पहल गरिनुपर्छ ।
● उच्चजोखिममा रहेका व्यक्तीहरु जस्तै वृद्धवृद्धा, मुटु, किडनी, फोक्सोका रोगी, उच्चरक्त चाप, मधुमेहबाट ग्रस्तहरुको नियमित औषधिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्ता व्यक्तिसँग सामाजिक दुरी कायम गरिनु अत्यावश्यक छ ।
● मानसिक त्रास, डर, चिन्ता उच्च रहनेहुँदा आपसमा कुराकानी गरेर तनाव कम गर्नसकिन्छ । यसका लागि फोन, फेसबुक, ईमो, भाईबर, ह्वाट्सएपजस्ता समाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । आवश्यक पर्दा घरबाटै सरकारले उपल्ब्ध गराएको १११५ तथा विभिन्न स्वास्थ्यसंस्थाहरु मार्फत उप्लब्ध गराईएको फोन नम्बरहरुमा सम्पर्क गरि विशेषज्ञसङ्ग परामर्श लिन सकिन्छ ।
●विभिन्न अनलाईन मिडिया, पत्रपत्रिकादेखि समाजिक संजालमा अनेक अफवाहहरु लेख्ने र फैलाउने कार्य भईरहेको छ । सरकार र सम्बन्धित निकायले यसरी भ्रम छर्नेलाई कारबाही गरिरहेको छ । सञ्चारमाध्यमले कोरोना भाईरस सम्बन्धी जानकारी दिँदा आधिकारिक स्रोतहरुलाई मात्र उल्लेख गरिनुपर्छ ।
●स्वास्थकर्मी तथा सुरक्षानिका यजस्ता अग्रपंक्ति तथा जोखिम पूर्ण अवस्थामा रहेर सेवा प्रादान गरिरहेकाको मनोबल उच्च राख्न चाहिने सामाजिक सद्भाव, सुरक्षित वातावरण तथा सेवासुविधा प्रदान गर्नु हामीसबैको नैतिक जिम्मेवारी हो ।
विश्व स्वास्थ्यसंगठनले कोरोना महामारीबाट जबसम्म हामी सबै सुरक्षित हुँदैनौ, तब सम्म कोहि सुरक्षित रहँदैनन ’’ भनेर भनेको छ । तसर्थ अहिलेको प्रमुख आवश्यकता राष्ट्रका सम्पूर्ण संयन्त्रहरु एकजुट हुनु हो । अविश्वास तथा अनुशासनहिनता त्याग्नु पर्छ । कोरोनाभाईरस संक्रमणको माहामारी बिरुद्ध एक ढिक्का भएर लाग्नुको बिकल्प छैन् ।
नेशनल मेडिकलकलेज वीरगञ्जमा कार्यरत डा. असरफ हुसैन, बरिस्ठ फिजिसियन
कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयरकै संलग्नतामा कालोबाजारीको आशंका
भारतले फेरी तीन साता लम्ब्यायो लकडाउन
दुईदिने पशु उपचार तथा ब्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
१९ माघ २०७५, शनिबार १४:१७ 2019-02-02 एपी खबर
चीनको हुबेई प्रान्तबाट १ सय ७५ जना नेपाल घर फर्किए
४ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०५:४१ 2020-02-16 AP Khabar
अत्यधिक हिमपातका कारण १८ को मृत्यु
४ माघ २०७५, शुक्रबार ०५:४८ 2019-01-18 एपी खबर
ed over the counter cvs commented on कोरोना भाइरसको कारण स्पेनकी राजकुमारीको निधन: ed over the counter cvs http://www.cialij.com/
shop tylenol commented on “ओ माया” बोलको गित बजारमा: shop tylenol https://tylenol1st.com/
ปั้มไลค์ commented on थाइल्याण्डद्वारा नेपाललाई १ सय २५ रनको लक्ष्य: Like!! I blog frequently and I really thank you for your content. The article has truly peaked my in